Esi zụta pvc plastic n'ala n'ụzọ kwesịrị ekwesị-News-Topflor China amachi
Echiche:62 Onye edemede: Onye ndezi saịtị Bipụta Oge: 2020-07-13 Mmalite: Saịtị
Ka ọ dị ugbu a, e nwere ọtụtụ ụdị ala PVC plastic na ahịa, na e nwere ọtụtụ ụdị. Typesdị ndị ahụ bụ: pvc flooring composite (nkewakwara n'ime ụdị ụfụfụ na ụdị ihe mejupụtara), pvc homogeneous floor, okwute plastik nkume, ala linen, roba na wdg. Olee otu esi ahọrọ ọtụtụ ụdị pvc flooring?
Họrọ dị ka ina. Nchọpụta na-ezo aka na ebe eji ya. Dịka ọmụmaatụ, maka iji ụlọ ọgwụ, ọ dị mkpa ịhọrọ mgbochi na-eguzogide abrasion, gburugburu ebe obibi, antibacterial, ndụ ogologo oge, mgbochi nsị, wdg Thisdị ebe a dabara adaba maka otu ụdị ahụ site na ala pvc; maka iji ụlọ akwụkwọ ọta akara, ọ dị mkpa ịhọrọ pvc dị nro ma na-agbanwe agbanwe, ụdị ụfụfụ, n'ihi na ala a na-agbanwe agbanwe na agba dị iche iche, ọ nwere ike igbochi ụmụaka allda na ịkụ aka nwere ike iji ụdị dị iche iche mara mma ma na-arụ ọrụ, yabụ ọ kwesịrị ekwesị maka ụmụaka; n'ihi na ụlọ ọrụ were, ị nwere ike họrọ ịkwanyere ọtụtụ ihe mejupụtara n'ala ma ọ bụ nkume-plastic n'ala, ịkwanyere mejupụtara n'ala họrọ oké ụdị, ụlọ ọrụ okporo ụzọ adịghị Nnọọ nnukwu, ma e nwere ọtụtụ tebụl na ụlọ ọrụ oche. The ịkwanyere mejupụtara n'ala ok ma ọ bụ nkume plastic n'ala nwere ike izute a chọrọ. Ọ na-eguzogide ọgwụ mkpakọ ma ghara ichegbu onwe ya banyere tebụl ma ọ bụ oche ọfịs a na-echi ọnụ n'ala. N'ezie, ụdị ebe a nwekwara ike iji otu site na ala. Site na ọnụ ego, homogenous penetrating dị elu. Ọ bụrụ na ị na-eji otu àgwà penetrating ala-ọgwụgwụ ngwaahịa price, ị pụrụ ịzụta elu-ọgwụgwụ ngwaahịa nke ịkwanyere ọtụtụ ihe mejupụtara. Ọnụahịa nke pvc mejupụtara ala dị ogologo karịa ala permeable. Ọtụtụ nwekwara ike ịhapụ ụgwọ mmezi kwa afọ. Yabụ, ịtụle ọnụ ahịa iji ọfịs, kwalite PVC mejupụtara ngwaahịa ma ọ bụ nkume-plastic flooring.
Kedu ihe m kwesịrị ịme ma ọ bụrụ na ala ụlọ akwụkwọ ọta akara na-emebi emebi mgbe mgbe? Nwere ike ịchọrọ ịnwa ala PVC na-eyi akwa